एकै परिवारका ४ भाइ चोर ! प्रहरी चकित – Rastriyapatrika
एकै परिवारका ४ भाइ चोर ! प्रहरी चकित
अधिकांश पटके प्रहरीका अनुसार चोरी गर्दागर्दै समूहमध्येका कोही सदस्य पक्राउ परे जेलबाट छुटाउनेदेखि परिवारका सदस्यलाई हेरचाह गर्ने जिम्मा बाहिर बसेकाले लिन्थे । जेलबाट छुटेपछि फेरि पुरानै धन्दामा सक्रिय हुन्थे । उनीहरूले वर्षांैदेखि चोरी र ठगी धन्दा चलाउँदै आएको प्रहरीको दाबी छ । डिएसपी बोगटीले भने, ‘पक्राउमध्ये अधिकांश पटके छन् । उनीहरूको आफ्नै नियम रहेछ । जो जेलमा पर्छ । उसलाई छुटाउनेदेखि खर्च बाहिर बसेकाहरूले गर्थे । परिवारका सदस्यलाई हेरचाह गर्ने जिम्मा पनि उनीहरू नै लिन्थे । आलोपालो गर्दै उनीहरूले वर्षौंदेखि चोरी र ठगी धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ ।’